warkii.com » RASMI: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Premier League Uga Degtay Heerka Labaad Oo La Xaqiijiyey
RASMI: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Premier League Uga Degtay Heerka Labaad Oo La Xaqiijiyey
Norwich City ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee xili ciyaareedkan ka dhacday sallaanka horyaalka Premier League, waxaanay dib ugu noqotay heerka labaad ee Championship oo ay fasal ciyaareedka dambe ka ciyaari doono.
Kooxdan lagu naanayso Cnaries, ayaa guul-darro weyn oo xanuun badan loogu xambaariyey garoonkooda oo ay ku qaabishay West Ham United, waxaana burburiyey oo afar gool ka dhaliyey Michail Antonio.
Norwich City oo 21 dhibcood oo kaliya ka heshay 35 ciyaarood oo ay dheeshay ayaa noqoay kooxdii ugu badnayd ee dib uga noqota horyaalka Premier League intii uu sitay magacan loo bixiyey sannadkii 1991kii, waxaanay heerka labaad u dhaceen afar jeer oo hore oo ahaa xili-ciyaareedyadii 1994/95, 2004/05, 2013/14 iyo 2015/16, waxaana xili ciyaareedkan uu u noqonayaa markii shanaad ee ay ka dhacdo sallaanka.
Kooxaha Middlesbrough, Sunderland iyo Crystal Palace oo min afar jeer heerka labaad u degay tan iyo 1991/92kii ayey Norwich kasii hoos martay.
Dhinaca kale, West Ham United oo xili ciyaareedkan hoos u dhac weyn ku yimid ayaa ka baxday cabsidii ka haysay inay dib ugu laabato heerka labaad, waxaanay lix dhibcood ka horreysaa naadiga kaalinta 18aad ku jira ee khadka cas dhex fadhiya.
West Ham waxay leedahay 34 dhibcood oo ay ka heshay 35 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah oo ay ciyaartay, waxaanay ku jirtaa kaalint 16aad.
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa kulamada soo socda laga go’aamin doonaa laba kooxood oo kale oo ka baxaya tartanka, dibna ugu laaban doona heerka labaad, waxaana halista ugu weyn ku jira oo rajadoodu ay haddaba xun tahay Aston Villa oo 27 dhibcood leh iyo Bournemouth oo 28 dhibcood haysata.